हामी यसलाई मिडिया भन्छौं, यो वास्तवमै एक मध्यम | Martech Zone
हामी यसलाई मिडिया भन्छौं, यो वास्तवमै एक मध्यम हो
सोमबार, फेब्रुअरी 16, 2009 Douglas Karr
मिडिया को परिभाषा हो:
मिडिया: रेडियो र टेलिभिजन, अखबारहरू, र म्यागजिनहरूको रूपमा सञ्चारका माध्यमहरू, जुन मानिसहरूलाई पहुँच वा प्रभाव पार्दछ व्यापक
मैले जोड दिए व्यापक। यो सत्य हो कि फेसबुक वा ट्विटर वा अन्य कुनै सामाजिक नेटवर्क सोशल मिडिया टेलिफोनको रूपमा छ। टेलिफोन एक उपकरण हो। फेसबुक र twitter उपकरणहरू हुन्। तिनीहरू एक माध्यम बाट गेटवे प्रदान गर्दछ।
मध्यम: एक हस्तक्षेप गर्ने एजेन्सी, साधन, वा साधन जसको माध्यमले केहि सन्देश पुर्‍याइन्छ वा प्राप्त हुन्छ: शब्द अभिव्यक्तिको माध्यम हुन्।
हामी सबै बसेर हाम्रो कम्प्युटरमा फेसबुक हेर्दैनौं, हामी यसको साथ कुराकानी गर्छौं र यसलाई अरूसँग कुराकानी गर्न प्रयोग गर्दछौं। एक माध्यमको रूपमा, यो महत्वपूर्ण छ कि मार्केटरहरूले यसलाई चिन्न सक्छन् ... यसको मतलब तिनीहरू त्यहाँ बाहिर केहि पोस्ट गर्न सक्दैनन् र केहि हुने आशा गर्न सक्दैनन्, उनीहरूले भाग लिन आवश्यक छ। यसलाई हुने बनाउने.
सर्वेक्षणमा सेठ छुटेको दुई थप सुझावहरू
टेक्नोलोजीको गतिमा शिक्षा
म पुरा सहमत छु। मलाई लाग्छ कि मानिसहरूले फेसबुकको व्यक्तिगत पक्षहरूसँग अन्तर्क्रिया पाउँछन्, तर व्यापार संसारमा समात्न ढिलो छ।
विशेष गरी यहाँ उत्तरी इन्डियानामा जहाँ म निरन्तर उदाहरणहरू देख्छु जहाँ यो क्षेत्रले "यो प्राप्त गर्दैन"।
यहाँ राम्रो पोस्ट। यद्यपि यो छोटो छ यो जानकारीमूलक छ र सीधा मुख्य बिन्दुमा। मिडिया भनेको मार्केटिङ मात्र होइन, यसले समुदायहरूसँग जोड्ने, अन्तरक्रिया गर्ने र सञ्चार गर्ने काम हो।. चीजहरू गर्नको लागि, तपाईंले वास्तवमा यसको लागि काम गर्नुपर्छ। समय र प्रयासहरू लगानी गर्नु भनेको केहि हासिल गर्नको लागि कुञ्जी हो।
न्यायमूर्ति O. Omorodion
यो सत्य हो कि हामी केवल केहि पोस्ट गर्न सक्दैनौं र वास्तविक सहभागिता बिना केहि महान हुने प्रतीक्षा गर्दै बस्न सक्दैनौं। र म यी मिडियाहरूको एक महान सक्रिय सहभागी हुँ तर तिनीहरूसँग कहिल्यै ठूलो परिणाम छैन।
मैले आज फरक तरिकाले के गर्न थाल्नुपर्छ जस्तो लाग्यो?